ဆေးဘဲဥ (century egg)ကိုစားသင့်သလား ??? - Software Guide
Home / ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ / ဆေးဘဲဥ (century egg)ကိုစားသင့်သလား ???
ဆေးဘဲဥ (century egg)ကိုစားသင့်သလား ??? Reviewed by Ko Lin on 12:23:00 PM Rating: 5
Ko Lin 12:23:00 PM ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ
ဆေးဘဲဥ (century egg)ကိုစားသင့်သလား ??? - ဗဟုသုတအနေနဲ.လူတိုင်းသိသင့်ပါတယ်
ဆေးဘဲဥကို century egg,preserved egg,hundred year egg, thousand year egg, millennium egg ,ထုံးဘဲဥ , ဖီတန် (္မံ တရုပ်လို နာမည်ပါ pidan ) လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။